Embroidery Lace Fabric - umkhiqizi, ufektri, umhlinzeki waseChina
(Yonke imikhiqizo engu- 24 ye-Embroidery Lace Fabric)
I-Crystal Sequin Shiny Embroidery Lace Indwangu
Indwangu ye-Lace Blue Floral Beaded Embroidery Lace
Indwangu ye-Navy Blue Floral Beaded Embroidery Lace Fabric inemibala egqamile, ebukeka kabi futhi inomqondo oqinile wokwenza kanye nephethini yokulinganisa. Izingubo ezenziwe ngendwangu eluhlaza okwesibhakabhaka yasolwandle zibukeka zinhle futhi zibukeka ngamehlo. Nge-100% ye-polyester impahla, izindwangu zezintambo...
I-White Embroidery lace Africa Tulle Lace
I-White Embroidery lace Africa Tulle Lace inemibala emibalabala, ebukeka kabi futhi inomqondo oqinile wokwenza kanye nephethini yokulinganisa. Izingubo ezenziwe ngendwangu emhlophe ye-african lace zibukeka kahle futhi zibukeka ngamehlo. Nge-100% ye-polyester impahla, i-african lace lendwangu ye-austria yomshado...
Indwangu ye-Mint Hand Beaded Embroidery Lace
Indwangu yethu ye-Mint Hand Beaded Embroidery Lace Fabric yenziwe nge-100% polyester. Zenzelwe abaklami abadumile, yini ekhethekile ukuthi ubuhlalu buhanjwa ngesandla, ngakho indwangu yethu eyenziwe ngendwangu ye-Mint iyanethezeka futhi ibuthaka. Imibala yokwehluka ingakhethwa okokugqoka kwephathi, ukugqoka komshado...